ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာနိုင်ငံက မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ တပ်မတော်ဟာ သန်းရွှေနဲ့ သူ့မိသားစုအတွက် င်္ဒီလောက်တောင် မိုက်မဲနေကြပြီလား၊ ... မယုံနိုင်စရာပါပဲ။
မန္တလေးမြို့ တစ်နေရာမှ စစ်တပ်၏ မြို့လယ်ခေါင် ပစ်ခတ်မှု
Award Nobel Peace Prize to Burmese Monks
11 October 2007 at 00:23
petitions? do they really work???
noble- You won't know until you try.